अनमोलको ‘कृ’को चर्चा अहिले ! - Sajha Entertainment
Home/अन्य no use/अनमोलको ‘कृ’को चर्चा अहिले !
अनमोलको ‘कृ’को चर्चा अहिले !
Sajha Entertainment Send an email २७ असार २०७४, मंगलवार १४:०४
लामो समयको वर्कसप पछि चकलेटी हिरो भनिएका अनमोल केसी यति बेला चलचित्र ‘कृ’ सुटिङमा व्यस्त छन् । अनमोलका बुवा भुवन केसीको अनुसार चलचित्रको ६५ प्रतिशत छायाङ्कन पुरा भइसकेको छ ।‘कृ’ को छायाङ्कन भक्त्तपुर लगायत काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ ।फ्लीमलाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गर्दैछन् भने निर्माण भुवन केसी र सुवास गिरीले सँयुक्त रुपमा गर्दैछन् । त्यसैगरी, अनमोल केसीको साथमा नव नायिका अदिथि बुढाथोकीले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्दैछीन् ।
‘कृ’को पोस्टर भने केही दिन अघी मात्रा सार्वजनिक गरिएको हो । पोस्टरमा देखिएको अनमोलको लुक्सले निकै नै चर्चा बटुल्दै छ । साथै, नायक अनमोलले आफ्नो पर्सनल इन्सटाग्राम एकाउन्टबाट flim ‘कृ’ का केही तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेपची ‘कृ’ प्रती दर्शकहरुको चर्चा चुलिएको छ ।
Bikash Lama's Cover song of Ragat Pasina
सानी अनिता थापाको अग्ला भोगाईहरु !